China khetha & ukupakisha inkonzo yokufezekisa kunye nearhente | Ilanga
Indawo yokugcina yase China
khetha kunye nokupakisha
Inkonzo eyongezwe ngexabiso
Inkonzo yokuthumela kwihlabathi liphela
Landa ipasile yakho
Ngaba inkonzo yethu yokukhetha kunye nokupakisha ibancede njani abathengi?
Umthengi uthe: Ndiyamangaliswa kakhulu kukuba iphakheji yemveliso intle kakhulu, imveliso ihambelana, kwaye umthengi wanelisekile. —— NgumRoma
Sinikezela ngokukhetha okupheleleyo kunye nokupakisha inkonzo yokufezekisa eyenzelwe ukuhambelana neemfuno zakho zeshishini!
99.6% ichola inqanaba lokuchaneka
Idityaniswe ngokupheleleyo kwiwebhusayithi yakho kunye namaqonga athengiswayo
Uhlaziyo lolawulo lwesitokhwe oluzenzekelayo
Inkonzo yosuku olunye
Kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo malunga nendlela esizifumana ngayo iiodolo zakho zokuqhutywa.
Ukhetho olukhethwayo kuninzi lwabathengi bethu kukuvumela ukudityaniswa kwe-API yeNkqubo yethu yoLawulo lweWarehouse (WMS) kunye namaqonga okuthengisa abawasebenzisayo okt Shopify, Amazon, Magento, Woocommerce njl. ukuthumela.
Siyazingca kakhulu kumgangatho wokuchaneka kokuchaneka okugqibeleleyo. Sisebenzisa itekhnoloji ye-barcode ukukhetha ii-odolo kwaye iqela lethu lifumana uqeqesho olubanzi kwaye iiodolo zihlala zijongwa ngaphambi kokuhambisa.
Sigcina uluhlu olubanzi lwezinto zokupakisha kubandakanya iibhokisi ezahlukeneyo, iimvulophu ezinamabala kunye nesikhuselo sembombo. Iqela lethu linamava amaninzi okuqinisekisa ukuba zonke iimpahla ezithunyelwayo zipakishwe ngokufanelekileyo, zinophawu oluchanekileyo ngolwazi lwenkampani yakho kwaye naziphi na izinto ezongezelelweyo zokuthengisa / ukufakwa kufakiwe.
Wamkelekile ukubonelela ngokupakisha kwakho okanye sinokukunceda ukuba upake uphawu lwakho lwentengiso olwenziwe eTshayina kwiinkcukacha zakho.
Abanye babathengi bethu bayabandakanyeka kulwabiwo lweevenkile kwimpahla yabo kunye nokuthengiswa kweAmazon FBA. Sinamava ekupakisheni ii-odolo ezixineneyo.
Iqela lethu lokugcina izinto linobuchule bokufezekisa ukuthunyelwa kumaziko e-FBA eAmazon kwaye ukusebenzisa ulwazi lwabo kunye namava banokukunika ezona ndlela zibiza kakhulu kwaye zilula zokuhambisa.
Xa umthengi efuna izinto ezahlukeneyo (ii-SKU's) ukuze athumele kunye, siyakwazi ukudibanisa ezi odolo ngokulula nangokuchanekileyo kwaye sicebise ezona ndlela zisebenzayo zokuthumela kwelinye ilizwe.
Inqanawa ngemini enye
Ukukhetha i-odolo ekhawulezileyo kunye nokuthumela kubalulekile kwi-ecommerce. Singakhetha, sipakishe kwaye sithumele zonke iiodolo ozifumanayo ngentsimbi yesi-4 (iBeijing Ixesha) kwangolo suku lunye lokuhanjiswa kwehlabathi ngomjelo wokuhambisa owuthandayo.
Oku kunokuba luncedo kakhulu ekuzalisekiseni amaphulo amakhulu axhaswa ngabantu, apho yonke iodolo yakho kufuneka ithunyelwe ngokukhawuleza. Sinamava okusebenza kunye neKickstarter kunye ne-Indiegogo yemikhankaso ehambisa ezona ziphumo zibalaseleyo kubathengi bethu nakwabaxhasi babo.
Inkonzo ye-China Pick & Pack
Inkonzo ye-Ecommerce Pick kunye nePakethe yeNkonzo
Khetha kunye nePakethe yokuThumela iiNkonzo kunye nokuGcina
Khetha kunye neNkonzo yokuPakisha eTshayina Shenzhen
Ivenkile yokuThatha kunye neNkonzo yokuPakisha eTshayina
Idilesi: C102 No.4 xiaolong road tongsheng yoluntu dalang street longhua isithili shenzhen city guangdong